Muxuu Yahay Baaskiiladaha Korontada Ee Ugu Fiican 00 | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn blog News Waa maxay Baaskiillada ugu Wanaagsan Korantada Ka yar $ 1000
Taariikhda ： 2020-08-06 Qeybaha ：News/ blog Muuqaalada ： 3,069 aragti
Waa Maxay Baaskiilka Korantada Ugufiican ee Kayar 1000
Baaskiil koronto ayaa u noqon kara xulashada dhabta ah ee saxda ah kuwa doonaya deg deg deg deg ah, raaxo leh oo dhidid la'aan ah, sidoo kale waxay rabaan inay ku raaxeystaan ​​raaxo xiiso leh oo xiiso leh ama raacitaan caadi ah. Ma aha oo kaliya inay yihiin jawi-saaxiibtinimo, ku habboon, is-waafajin kara, oo ku habboon safarada masaafada dheer, laakiin, in badan oo aan ahayn, waxay noqon karaan kuwo maalgelin ku sameeya nolosha, sidoo kale. Baaskiiladani waa sahlan yihiin in lagu raaco meelaha dadku ku badan yahay. Waxaad ku raaci kartaa baaskiilka adoo adeegsanaya baalal ama makiinad. Waxay kaa caawinaysaa inaad naftaada caafimaad u ahaato. Iibso baaskiil koronto ee ugu fiican 1000 waxay noqon doontaa shey maal-gashi lagu daray. Baaskiilka koronto ku shaqeeya wuxuu kuxiranyahay arimo badan qiimaha baaskiilku ku shaqeeyo koronto wuxuu kuxiranyahay astaamaha iyo tayada qalabka loo isticmaalo soosaarida baaskiiladaha korontada. Aan ka wada hadalno 5 baaskiillada korantada ugu fiican ee ka hooseeya $ 1000 shirkadda Shuangye ee baaskiilka korantada. Waxaan rajeynayaa inay kaa caawin doonto inaad adiga kuu dooratid waxa kuugu fiican. Waa maxay baaskiil koronto ugu wanaagsan ugu wanaagsan $ 1000? Baaskiilada korantada ee korantada waa doorasho guud oo dadku. Waxaa loogu talagalay inay wax ka qabato dhul aan fiicnayn, sinnaan la'aan iyo faa'iidada lagu daro awoodda mootada iyo xawaaraha sidoo kale. Haatana baaskiilada korantada ee buuraha waxaa loo adeegsaday siyaabo kale, maahan oo keliya howlaha banaanka.
1.A6AH26 Baaskiil Baaskiil Caan ah oo Fiican
Haddii aad raadineyso baaskiil buur koronto oo ugu fiican oo ka hooseeya $ 1000 isweydaarsiga socdaalka iyo bannaanka labadaba. Waxaa macquul ahaan lagu qiimeeyaa waxayna bixisaa qiimo aad u weyn lacagtaada. Muuqaalka ugu weyn ayaa ah muuqaalka baaskiilka korantada muuqaalka ah wuxuu u egyahay baaskiil caadi ah markaad aragto markii ugu horeysay, Thanks to design of the bushkeerka baaskiilka buurta ah iyo baytariga qarsoon. Muuqaalkan baaskiilka oo leh batrool qarsoodi ah oo qarsoon oo ah 36v 10ah, naqshaddiisa meesha laga saari karo ayaa kaa dhigaya inaad ka soo qaaddo baaskiilka oo aad ku dallacdo meel kale. Kaliya hal lacag oo buuxa ayaa u baahan kaliya 5-6 saacadood oo u safrida 40-60km.250 watt ama 350 watt mooto bilaa bilaa liis ah waxay bixisaa awood fuulid iyo xawaareyn, waxaad si fudud u gaari kartaa xawaaraha ugu badan 25km / saacadii. Intaa waxaa dheer, muuqaal kale oo weyn ayaa ah 21 xawaare xawaare leh oo leh derailleurs, waxay u oggolaaneysaa si dhakhso ah, siman, iyo si sax ah oo loogu talagalay labada waddo oo siman, iyo sidoo kale dhul toosan. Mashiinka istareebka ah ee jimicsiga ah ee loo yaqaan '160mm disc brake' waxaad si nabdoon u wadi kartaa adoo ogaanaya in masaafada xajiyaha gaagaaban la hubinayo, iyo biriigaagu waxa uu siin doonaa fariin adag marka ugu horeysa. Thanks to aluminium aluminiumka ah, e-baaskiilkan culeyskiisu waa 21kg kaliya. Laba nooc oo fuulista, Pedal Assisted iyo E-Bike, oo kan hore bixiyay shan heerar oo kaladuwan oo hawlgal ah.
2.A6AB26 Baaskiil Buur Koronto Oo Iib Ah
Haddii aad u baahan tahay baaskiil dhaqaale, raqiis ah oo raaxo leh, A6AB26 mootada buuraha korantada iibka ah ayaa adiga kuu ah. Baaskiilkani wuxuu leeyahay 36V 250W matoor xawaare sare leh oo burush ah oo siiya awoodo buuro-weyne, adeegso baaskiilkan iyo sidoo kale fuulitaanka buuraha, ama safar maalinle ah. Oo ay ku rakiban yihiin batari dhalo ah oo 36v 10ah ah oo kuu oggolaanaya inaad raacdo baaskiil wadista illaa 40km oo ah hal kali oo buuxa, oo aad si fudud ku gaarto xawaare ku dhow 25km / saacaddii. Naqshadeynta batteriga waa muuqaal amni sidoo kale, waxay taageertaa batteriga oo laga qaado furaha laga bilaabo korantada si looga qaado, markaa uma baahnid inaad ka walwasho inay xadi karto. Gawaaridaan '″ 26' waxay ku habboon tahay raacid kasta oo dhulka ah, ha ahaato jidadka tareenka, quruurux, jidadka magaalada, waddooyinka dambe, ama waddooyinka baaskiilka. 160mm farsamooyinka bareegyada hore iyo gadaalba waa kuwo aad waxtar u leh si loo hubiyo nabadgelyada wadaha iyadoo la raacayo xaalad kasta oo fuushan. Bandhigga LCD ee waxqabadka badan ayaa sidoo kale laga helaa bartamaha xarkaha. Waxay muujineysaa raacida xawaaraha, masaafada, batteriga, awooda matoorka. Baaskiilada korantada ee korantada iibka ah sidoo kale waxay la socotaa 3W LED nalka hore ee muuqaalka si loo hubiyo dadka isticmaala nabadgelyada. Waa maxay baaskiillada ugu fiican magaalada ee ka hooseeya $ 1000? Isku celcelis ahaan rakaabka, baaskiillada ku shaqeeya korantada magaalada waxay noqon kartaa badbaadin naf-gooye ah. Baaskiilada korantada ah waxaa loogu talagalay meelaha caadiga ah, ku raaxaysashada meelaha baabuurta la dhigto ee magaalada, ama jidka loo maro dhismaha jaamacadda.
3.A5AH26 Baaskiillada Korantada Ugu Fiican Magaalada
Kani waa mid ka mid ah baaskiillada kuleylka ee korantada ku iibiya ee baaskiilka ku shaqeeya magaalada. Naqshadda quruxda badan, oo ay weheliso kontoroolada isticmaale-u-habboon iyo makaanikada ugu sarreysa ayaa tan ka dhigaysa mid la daaweyn karo. Naqshadeynta culeyska 26 inji waa mid ku habboon dadka da'da ah, dadka wata rakaabka ama ardayda dhigata koleejka. Baaskiillada gawaarida korantada leh waxay wataan batari 36v ah oo dib loo isticmaali karo oo batari ah oo lithium-ion ah oo ku qarsoon jirridda korantada, sidoo kale waa laga saarayaa si lagu dallaco, kaliya waxay u baahan tahay 5-6 saacadood inay ku dhammaystirto hal lacag oo buuxa. Gawaarida ayaa leh awood 250 watt ama 350 watt ah, waxay ku fuulayaan xawaare ugu sareeya oo ah 25-30km / saacaddii. Hadday tahay nooca Kaalmada Naafada ama nooca E-Bike, way fududahay inaad baaskiil ku waddo iyadoo leh awood aad u xoog badan. Baaskiilkan ku shaqeeya baytariga wuxuu leeyahay qaab si wanaagsan loo dhisay oo cimri dherer leh oo kordhiya adkeysiga baaskiilka. Nidaamka jejebiyuhu wuxuu adeegsadaa bareeg 160mm saxan caadi ah xagga hore iyo gadaal gadaal, wuxuu leeyahay bareeg xoog leh markaad u baahan tahay inaad baaskiil isla markiiba istaagto. Ebike wuxuu ka kooban yahay nidaamka gudbinta xawaaraha 21, ee loogu talagalay baaskiil koronto, waa in ka badan oo ku filan iyo 100mm isbeddelka safarka ee joojinta aluminium fargeetada hore waxay bixisaa saameyn nuugid naxdin leh markaad raacdo wadada.
4.A5AH24 Magaalada Baaskiilado Baaskiil Iib Ah
Haddii aad ka soo rawaxaysid gurigaaga ama aad xamuul qaadatid, magaaladan mootooyinka mootada leh ee iibka ah ayaa qaban doona. Baaskiilkan korontada ku shaqeeya wuxuu qaabeeyaa qaab-dhismeedka qaab-talaabo hooseeya, wuxuu isku daraa gadaal iyo amaah casri ah wuxuu ku noqdaa muuqaal qurux badan waddooyinka magaalada Waxaa lagu dhisay agagaarka aluminium aluminium fudud, koronto baaskiilkani wuxuu awood u leeyahay inuu u adkeysto maahan oo kaliya safarada magaalada dheer laakiin sidoo kale dhul qallafsan. Batariga lithium-ka ee 36v 10ah waa cadaalad in loogu yeero waaritaan hoostiisa iyadoo la adeegsanayo habka caawinta baydalka, oo kaliya waxaad qaadataa 5-6 saacadood inaad ku dhameysatid lacag dhan, raacida 40-60km dhib maahan. Si kasta oo ay tahay caawinta baydalka ama nooca e-baaskiil, 250w matoor aan lahayn burush ayaa had iyo jeer siiya awood ku filan baaskiil xawaare ugu sarreeya oo ah 25km / saacaddii. Heer caadi ah V-bareega iyo bareega korantada gadaal leh qufulka mootada, iyo 3W LED nalka hore si loo hubiyo badbaadada raacitaanka muuqaalka hoose. Haddii aadan jeclayn 24 giraangir, waxaa jira 26-inch wheel oo la doorto midka ku habboon dad badan. Baaskiiladan mootada leh ee iibka ah ayaa sidoo kale ah xulasho ku habboon gaarsiinta adeegga cuntada.
5.A1-7 Baaskiil isku laaban oo Baaskiil ku shaqeeya
Baaskiil ku shaqeeya laabashada 20 battery baytariga kuxiran waxaa lagu qalabeeyaa dhamaan jajabka saxda ah ee ka dhigaya mid ku haboon jidadka magaalada oo siman. Haddii aad rabto dhaqaale, sahlanaan, deg deg deg deg ah, ku habboon in la qaado oo aan boos badan la qaadan, waa xulasho habboon haddii aad ku cusub tahay baaskiil wadista. Mashiinka 250W ee aan burushka lahayn ayaa wali kufiican in uu wax kaqabto caqabado badan wuxuuna la yimid batari lithium qarsoon oo 36V 10Ah ah. Batariga waa mid lagaa saari karo adiga oo ku siinaya ikhtiyaarka aad kaga dallacdo baaskiilka dhexdiisa iyo dibaddiisaba. Waad gaari kartaa xawaaraha ugu sarreeya 25km / saacaddii, iyo xaaladaha ku habboon, waxay ku socon kartaa illaa 40-60 iyadoo hal mar lagaa qaadayo. Waxaa jira seddex hab oo fuushan oo aad kala dooran karto - qaabka korantada saafi ah, habka caawinta baydalka iyo qaabka baaskiilka caadiga ah. Habka korantada saafiga ahi waa midka la raacayo haddii aad rabto inaad ku raaxaysato safarka masaafada dheer adigoon marin baal. Waxa kale oo jira ikhtiyaar lagu doorto qaabka PAS. Habka caawinta baydalka wuxuu leeyahay shan heer oo waayo-aragnimo wadista loogu talagalay. Shaashadda badan ee LCD waxay muujineysaa awoodda mootada, awoodda batteriga, heerka PAS iyo wax ka badan. Ku darma 7 gears xawaare ah iyo 160 nidaamka jejebiyey disc ayaa hubinaya wareejin iyo bareeg awood badan. Waxaa jira 5 Shuangye (Hotebike) baaskiil koronto oo ugu fiican oo aan raadin karo kaasoo ka hooseeya $ 1000. Marka la soo koobo, dhammaantood waa mudan yihiin tixgelin, sidaas darteed haddii aad xiisaynayso mid ka mid ah, nala soo xiriir ama fariintaada hoos uga dhig. Baaskiilado kale oo badan oo koronto ah oo la iibinayo, soo booqo bartayada Websiteka rasmiga ah.
Tags:Baaskiil koronto oo ugufiican 1000
Ka hor: 4 sababood awgood dadku waxay doorbidaan baaskiil wadayaasha korantada
Next: Sidee dhakhso badan ayey u socotaa labalaab 750w mooto oo dufan ah oo culeyskiisu yahay baaskiil wadista